Amniga & Nabadgelyada - Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland
Taageer WADDANI, Taageer Horumarka Somaliland
Mabaadii’da Guud & Hiigsiga WADDANI
Arimaha Dibada & Ictiraafka
Nabadda & Ammaanka
Koboca Dhaqaalaha iyo Shaqo-Abuurka
Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha
Amniga & Nabadgelyada
DIFAACA QARANKA IYO HORUMARKA CIIDAMMADA:
Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku guulaysatay joogtaynta nabaddeeda iyo in dadkeedu diyaar u yihiin difaaca dalkooda. Hase yeeshee waxa lagama maarmaan ah in la helo ciidan xoog leh oo mar walba u diyaarsan difaaca qarannimada Somaliland, Ciidamadu waa astaanta koowaad JSL tiirka u ah. Xukuumadda WADDANI waxay tayeynaysaa awoodda dadka Somaliland ay ku difaacanaayaan qarankooda koraya.
ku tallaabsan doontaa dhismaha awoodda buuxda ee ciidanka qaranka si uu u sugo difaaca xuduudaha dalka isaga oo ka diyaarsan dhinacyada saanadda, tababarka iyo daryeelkaba, isla markaana uga wacyi-gashan inuu difaaco dastuurka qaranka kana fogaado is-riixriixa siyaasadda xisbiyada.
Hirgelinaysaa nidaamka kaydka dadka tababaran (Reservists) si loogu diyaar garoobo difaaca dalka isla markaana loo kaabo baahida ciidanka joogtada ah.
Daryeelaysaa qoysaska danyarta ciidanka aagagga hore ku maqan, taageeraysaana kuwa ku agoomooba hawl-gallada ciidanka, difaaca qaranka iyo kuwa naafoobayba.
Taageeraysaa dedaalka dalalka gobolka iyo kuwa caalamaka ee nabadda iyo degganaanshaha lagu adkaynayo.
Korinaysaa tayada iyo tamarta ciidanka xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland, si loo sugo badbaadada khayraadka iyo xuduudkeena dhaqaale ee baddeenna (Exclusive Economic Zone). Waxa kale oo laga ilaalinayaa sunta lagu daadsho, bililiqada iyo xaalufinta kalluunkeena iyo budhcad-badeedda.
Kor-u-qaadaysaa aqoonta, xirfadda, qalabka iyo miisaaniyadda Ciidamada Asluubta si loo xoojiyo awooddooda xil-gudasho.
Dammaanad-qaadaysaa in ay dirayska ciidamda kala duwan ee qaranka xukuumaddu miisaaniyadda qaranka ka soo iibiso, si ay u ilaaliso, sirta ciidanka, astaanta, calaamadaha muujinaya qarannimada Somaliland iyo u-gaarnimada midabkooda.
Dhisaysaa awoodda sirdoonka qaranka si looga hor-tago khatarta argagixisada, budhcad-badeedda, denbiyada isaga tallaaba xuduudaha iyo dhibaataynta degaanka bad iyo berriba. Waxay dib u eegaysaa xeerka hawlgalka Hay’adda Sirdoonka iyada oo kala saaraysa hawl-gallada gudaha iyo kuwa dibedda; xaqiijinaysana in sirdoon iyo ciidan loogu talo-galay caddawga dibedda aan marnaba muwaaddiniinta loo adeegsan.
Dib-u-eegaysaa xeerka sirdoonka qaranka ee Xeer Lr 59/2012.
Kor-u-qaadaysaa awoodda ilaalinta dhulkeenna iyo khayraadkeenna iyada oo aynu hirgelinayno adeegsiga teknoolojiyada cususb ee “drone”-ka si aynu u ilaalinno baddeenna, uga badbaadno xaalufinta kalluunka, kuna ilaashanno xuduudaheenna iska furan ee buurleyda u badan.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay ku tallaabsan doontaa:
Xoojinta ciidanka booliska tiradiisa, tayadiisa, qalabkiisa, miisaaniyaddiisa, hawl-galka iyo tababar gaar ah oo khuseeya sida loo sugayo ammaanka dadka ka dukaansanaya suuqa loolana dagaallamo tuugada habeenkii jidadka is-taagta iyo kooxaha budhcadda ah oo si gaar ah u bar-tilmaansada haweenka iyo waayeelka.
In ay dadku ka badbaadaan ciidammada booliska xilliyada bannaan-baxyada sharciga ah, isla markaana Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay joojin doontaa in boolisku dadka rayidka ah xabbad u adeegsado.
Taageeraysaa degaannada is-abaabula ee ilaaladooda sharciyeysan samaysata lana shaqeeya booliska iyo hay’adaha ammaanka gudaha (community policing),
Dib-u-eegi doontaa xeerka qabyo-qoraalka sharciga booliska iyo hirgelintiisa.
Sugaysaa sharciyadda hubka uu shacabku haysto, si ammaanka loo adkeeyo.
U DIYAARGAROWGA AAFOOYINKA
Xukuumadda WADDANI iyada oo mar kastaba u taagan badbaadada dadkeeda waxay u diyaar-garoobeysaa ka hortagga iyo maareynta aafooyinka.
Xoojinta iyo tayeynta hay’adaha dawliga ah ee ka hortagga aafooyinka qaabbilsan.
Diyaarinta qorshayaal oddoros (early warning system) oo aafooyinka la xidhiidha
Is-kaashi aynu la yeelanayno waddamada gobolka si looga hor-tago loona maareeyo aafooyinka inna wada saameeya.
Dhigista qorshayaal iyo kaydad lagaga hor-tago abaaraha (Biyo la’aanta iyo daaq la’aanta), ka hortagga macaluusha ka timaadda abaaraha iyo jiilaalka, cudurrada faafa mid jiray iyo kuwa kedis ah, iyo aafooyinka dhulgariirka iyo duufaannada. Kaydka waxaa ka mid ah: miisaaniyad, Gaadiid iyo Qalab, Shidaal, cunto, Kayd biyood, calafka xoolaha, dawo, dadkii ka shaqayn lahaa iyo xirfadaha loo baahanyahay;
Waxay hawlgelin doontaa in ciidamada qaranku u diyaarsanaadaan in ay door weyn ku yeeshaan ka samatabaxa aafooyinka.
MAARAYNTA XIISADAH MIYIGA:
Hirgelinta siyaasad ah intaaanu khilaafku faraha ka bixin in la qabto oo ay ka hawl-galaan madax-dhaqameedka oo ay kow ka yihiin cuqaasha iyo maamulka dawladda ee degaanka oo is-kaashanaya.
In awood iyo miisaaniyad ku filan loo qoonddeeyo maamulka degmada iyo booliska si markiiba ay ugu gurman karaan khilaafka iyo muranka, gacantana ku qaban karaan fidmo-walayaasha.
Ka-hor-tagga fidmada (gaar ahaan ta reeraha dhex taal) iyo ku xakamaynta xeerar qaran ilaha fidmada dhaliya ee ay ka midka yihiin qodista berkadaha, samaynta dhismo tuulo ee degaan-daaqsimeeddoo dadka ka dhexeeya iyo sidoo kale oodashada sharci-darro ee dhul-cawseedyada.
Abaabulka doodo iyo wada-tashi laga yeesho iyo iska-wacyigelin caadada lagu difaaco qof dil iyo denbi geystay lagalana baxsado sharciga.
ADKAYNTA MIDNIMADA DADKA IYO DHULKA JAMHUURIYADDA SOMALAILAND
Midnimada dadka Jamhuuriyadda Somaliland ee gudahoodu waxay shardi u tahay: damaceenna siyaasadeed, dhaqaale iyo horumar bulsho; dhismaha bulsho barwaaqo ku nool iyo nabad iyo xasilooni waarta. Haddii aan taas la helin oo la adkayn, dadka Jamhuuriyadda Somaliland meel kasta oo ay joogaanba waxay u dabranaan doonaan caqabado waaweyn oo ka soo wajaha dhanka horumarka iyo ammaanka, kuwaas oo marka danbena ina geyeysiin kara dhibaato baahda. Jamhuuriyadda Somaliland waxa si rasmi ah loogaga dhawaaqay 18kii Meey, 1991kii magaalada Burco, ka dib heshiiskii iyo saxeexii wakiillada bulshada ku dhaqan bariga, badhtahama iyo galbeedka dalka, taas ayaa ka dhigaysa in ay dhammaantood u siman yihiin Jamhuuriyadda Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, Xisbiga WADDANI wuxu aqoonsan yahay cabashada iyo dalabka bulshooyinka Sool iyo Sanaag Bari; wuxu garowsan yahay farqiga weyn ee dhanka horumarka iyo wadaagga manaafacaadka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, kaas oo sababay in gobolladaas horumarkoodu ka gaabiyo dalka intiisa kale. Sidaa awgeed Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay arrimahaas siin doontaa mudnaanta koowaad.
GobolladaBari (Sool iyo Sanaag-bari)
In ay furto wada-hadallo degdeg ah oo lagu maareynayo dhibaatooyinka iyo dalabka bulshooyinka iyo deegaannada Sool iyo Sanaag-bari, iyada oo meel-kasta oo xal guud ku jiro ka deyi doonta, si looga heshiiyo arrimahaas, loona sugo midnimada Jamhuuriyadda Somaliland.
Magacaabista iyo Hawl-gelinta Guddi-qaran oo shaqadoodu tahay in ay miiska soo saaraan dhammaan waxyaabaha arrinkan xalka u noqon kara, in ay daba-galaan fulinta heshiisyada la gaadho ama hore loo gaadhey iyo in ay dhisaan is-aamminaadda bulshada Jamhuuriyadda Somaliland hadday tahay bari, badhtamaha iyo galbeedkaba.
Hubinta, meel-marinta iyo kor-joogteynta heshiisyada. Waxaynu yeelan doonnaa dariiq cad oo waqtiyeysan oo loo maro dhamaystirka hawshan. Waxa kale oo meesha laga saari doonaa hannaan kasta oo mad-madow gelin kara horumarinta heshiisyada dhinacyadu gaadhaan.
Samaynta Khasnadda Horumarinta Gobollada Bariga, oo ay ku jirto 2% kii hore u jiray ee loo qoondeeyey horumarka gobollada bari, lana kordhiyo miisaaniyadda iyo kabka dawladda, iyo in laga codsado maal-gelin dheeraad ah deeq-bixiyeyaasha. Ujeeddaduna waa in isha lagu hayo meeshana laga saaro dib-u-dhaca dhanka horumarineed ee bulshadaa iyada oo waqtiga dheer u soo adkeysaneysay, iyada oo wax-qabadku noqonayo mid la taaban karo.
Aqoonsiga, nabadda iyo Xidhiidhka Caalamka
Dejinta siyaasadda difaaca qaranka oo sugan
Dhisidda ciidan milateri iyo boolis oo xooggan oo saraakiil aqoon sare leh, si buuxana u diyaarsan, mushahar, daryeel iyo miisaaniyad u qalantana leh.
U-xaqiijinta dawladaha gobolka iyo dunidaba in Jamhuuriyadda Somaliland kaalinteeda muhiimka ah ee maanta ay kaga jirto sugidda nabadda gobolka iyo deganaanshaha caalamkaba ay ka sii wax-tar badnaan lahayd iyada oo la ictiraafo.
Xaqiijinta Jamhuuriyadda Somaliland in ay tahay dal dimuqraadi ah, qaynuunka ku dhaqma, oo ka nadiifoobay musuq-maasuqa; kaas oo ilaaliya xuquuqal-insaanka, xoriyadaha asaasiga ee dadka iyo ku-dhaqanka heshiisyada caalamku dhigtay.
Lahaanshaha wasaarad arrimo dibedeed oo tayo leh, kana midho-dhalin karta ictiraafka Jamhuuriyadda Somaliland iyo calankeeda oo xarunta Qaramada Midoobay ka babbada.
Dhisidda awoodda diblomaasiyadeed dad iyo aqoonba taas oo ka midho-dhalisa in Jamhuuriyadda Somaliland ku yeelato adduunka magac iyo saamayn togan; abaabusha qurba-joogga Jamhuuriyadda Somaliland sidii iyaga oo isku duuban ay fidinta magaca Jamhuuriyadda Somaliand iyo ictiraaf-raadinta uga hawl-geli lahaayeen.
Ilaalinta hiddaha iyo dhaqanka Somaliyeed ee suubban iyo soo noolaynta dhinacyada dabar go’aya.
Ilaalinta goobaha taariikiga ah sida Laas Geel oo Xukuumadda Xisbiga WADDANI u bandhigayso in ay ku biirto meelaha loo aqoonsaday dhaqanka caalamka ay UNESCO ilaaliso (UNESCO World Heritage Site).
Dhiirri-gelinta maal-gelinta dalxiiska ee shirkadaha gudaha iyo dibeddaba si dhallinyarada shaqo loogu abuuro.
Sugidda midnimada dadka iyo dalka iyo saami-qaybsiga caddaaladda ah ee kuraasta iyo khayraadkiisaba.
U Codee Xisbiga WADDANI (Doorashadii Waxa ka hadhay)
© 2018 Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland . All Rights Reserved. WADDANI VOLUNTEERS